Etu esi ekwu okwu Mmetụta Nchọpụta Ọchụchọ | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 27, 2010 Fraịde, Ọktọba 17, 2014 Adam Obere
Commentza ajụjụ na blọọgụ ndị ọzọ na-enyere aka nyocha ọchụchọ m? Nchịkọta algorithm nke Google na-atụsi ike na njikọ dị mkpa dị na saịtị gị. Ebe ọ bụ na njikọ laghachi na saịtị gị nyere aka, ọ gaghị abụ ihe ezi uche dị na ịza ajụjụ na ịhapụ njikọ gị ebe niile ga-abara saịtị gị uru? Ọ bụghị kpọmkwem.
Na vidiyo a na-adịbeghị anya, Matt Cutts (Qualitychọ Mma maka Google) na-atụle nsogbu ndị nwere ike ịhapụ ikwe ka ndị ọrụ tinye echiche na spam njikọ na blọọgụ gị. Have nwere ike ịchịkwa ọdịnaya dị na weebụsaịtị gị, ọ bụrụ na Google ejide gị na njikọta na ebe nrụọrụ weebụ spam, ha nwere ike ịtụle ebe nrụọrụ weebụ gị spammy.
Ọ na-emetụkwa ihe kpatara Google ji bụrụkarị adịghị ata ahụhụ na ebe nrụọrụ weebụ gị maka njikọ njikọ spammy. Ọ bụrụ na Google nyere ntaramahụhụ weebụsaịtị maka ụdị njikọ (s) nwere njikọ, mgbe ahụ ndị asọmpi ga-ewulite njikọ kachasị njọ nke ibe ha na-anwa iwepu asọmpi site na nsonaazụ ọchụchọ ahụ.
A ka nwere ọtụtụ blọọgụ ndị na-agbakwunye rel = ”nofollow” ekwu na njikọ njikọ. Kedu ihe kpatara onye nwe blọgụ chọrọ iji mee nke a?
A blog dofollow ikwu njikọ bụ ụgwọ ọrụ dị mfe nye ndị ọrụ na-agbakwunye nkọwa na nzaghachi bara uru. Onye nwe blọgụ ahụ na-enweta okwu bara uru nke onye ọrụ na-eme na onye ọbịa na-ahapụ ezigbo okwu na-enweta njikọ dofollow. Imirikiti blọọgụ na-ekwe ka njikọ nke ikwu okwu dofollow na-ekwusi ike na azịza na njikọ ndị ahụ, yabụ, ị gaghị enwe ike ịhapụ ịdekọrịta njikọ belụsọ na okwu gị na-atụnye ma na-agbakwunye uru na post post.
Ihe ọzọ mere blọọgụ nwere ike iji kwe ka ihe ndị a na-ekwu bụ ma ọ bụrụ na blọọgụ adịla ogologo oge na onye nwe ya anaghị emelite ikpo okwu mgbe mgbe. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, e nwere ọtụtụ puku blọọgụ ndị emeliterebeghị kemgbe e mepụtara àgwà rel = 'nofollow'. A ka na-eji ọtụtụ blọọgụ eme ihe ma na-agbakwunye ọhụụ ọhụrụ mgbe niile. Ọtụtụ n'ime blọọgụ ndị a na-edozi anya ma ọ bụ jupụta na spam na-ekwu okwu blog.
Ọ bụrụ na ị na-agbalị iwu profaịlụ backlink gị, m ga-eme ya zere blog posts na ihe ndị ọzọ spammy. O yikarịrị ka ị gaghị enweta ntaramahụhụ site na ịpị njikọ ndị ọzọ na njikọ njikọ spammy, mana Google na-amatakarị peeji ndị a nke spam na-ehichapụ ma na-ehichapụ ha na eserese njikọ ha.
N'ọtụtụ oge mgbalị nke ịmebe profaịlụ backlink gị site na ịpị njikọ njikọ blọgụ ekwesighi mbọ ahụ dị ka saịtị ndị a nwere ọtụtụ njikọ njikọta na ọnụọgụ PageRank kewara nke ukwuu iji gafee oke uru. Blog ikwu njikọ na rel = 'nofollow' àgwà agaghị agafe uru ọ bụla na weebụsaịtị gị.
Tags: backlinkscommentsogo njin ọchụchọA
Adam Small bụ onye isi nke AgentSauce, ihe ngosi zuru oke, ikpo ahia ahia ala nke akpakọrịta tinyere ozi ederede, email, SMS, ngwa mkpanaka, mgbasa ozi mmekọrịta, CRM, na MLS.
Social Media na Ndenye Aka
Feb 27, 2010 na 10:01 PM
Nke a bụ ozi pụtara ìhè. Otú ọ dị, otu ihe m ga-agbakwunye bụ na ịnye oke okwu na blọgụ ọzọ nwere ike mee ka ị lebara gị anya. Mgbe mbụ m bidoro ịde blọgụ, m na-aza ajụjụ na blọọgụ ma nye ha ezigbo ọdịnaya na mkparịta ụka. Ọtụtụ lere anya wee bido ijikọ blọgụ m. Amaara m na nke ahụ abụghị 1: 1 ahia na backlinks, mana ọ nwere ike ịmị mkpụrụ!
Ọzọkwa - Echere m na Google agbanweela ụzọ ha si emeso nofollow na dofollow n'ihi ihe ụmụ okorobịa SEO na-eme na peeji nke sculpting… ọ bụghị ya?
Akwa post! Daalụ!
Feb 28, 2010 na 3:48 PM
@Doug - Oge ọkọchị ikpeazụ na SMX Advanced Matt Cutts tụrụ aro na anyị kwesịrị iche banyere PageRank dị ka "evaporating" mgbe agbakwunyere àgwà nofollow. Ọ bụrụ na anyị ewere ya dị ka okwu ya nke a ga - apụta na ị nweghị ike ịmepụta ma ọ bụ kpụọ peeji nke PageRank gị site na iji njirimara nofollow.
Maka ịdị mfe ka anyị kwuo na post blọọgụ gị bara uru PageRank nke 10. I nwere ikike ịfefe uru a na ibe weebụ ndị ọzọ site na njikọ. Ọ bụrụ na ị jikọtara na ibe 9 ndị ọzọ n'ime weebụsaịtị gị na weebụsaịtị 1 na mpụga, ị na-efunahụ 10% nke uru PageRank ahụ ị gaara agara na websaịtị gị. Mgbe Google nabatara njirimara nofollow, SEO ndị nwere ọgụgụ isi gbalịrị ịgbakwunye àgwà a na njikọ mpụga na nke a iji chebe PageRank ha niile. Echiche bụ na nke a ga-ewusi ibe ndị ọzọ dị n'ime weebụ ha ike. Ọ bụrụ na anyị kwenyere Matt Cutts banyere PageRank na-ekpochapu ya na enweghị isi, mgbe ahụ ụzọ nke ibe PageRank na-akpụ na njirimara a enweghị uru.
Feb 28, 2010 na 3:49 PM
Ọ dị mkpa ikwu na ọ ka bara uru na ijikọ na ihe ndị ọzọ bara uru na ntanetị gị. Jiri vidiyo, onyonyo, njikọ na ozi bara uru baa ọgaranya na ntanetị. O yikarịrị ka ị ga-enweta uru PageRank karịa na ndị na-ahọrọ ijikọta na blọgụ gị karịa ihe ị nwere ike tufuo ijikọ na akụ ọzọ ma ọ bụ abụọ bara uru. "Nye ma ị ga-anata", "Ndị na-enye ihe na-enweta", karma, wdg. Get nweta isi. Ọ na-arụ ọrụ.
Feb 28, 2010 na 3:50 PM
Ọ ga-amasị m ịmara na Google nwere ikike ileghara njirimara nofollow anya. O yikarịrị ka ha agaghị eleghara àgwà a anya na njikọ njikọ blog. Ha nwere ike họrọ ileghara àgwà a anya na saịtị mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka Twitter ozugbo ha guzobere akaụntụ ndị ha nwere ike ịtụkwasị obi. Ihe atụ ọzọ ga - abụ ma ọ bụrụ na CNN.com họọrọ ịgbakwunye nofollow na njikọ ọ bụla. Google nwere ike ileghara ọtụtụ oge anya n'ihi na ha tụkwasịrị obi na njikọ na CNN.com bụ aha nchịkọta akụkọ bara uru nke weebụsaịtị.
My saịtị (pịa dezie)
Agụla m akwụkwọ ole na ole na isiokwu a ma ha niile na-ekwu okwu ka ukwuu banyere ịza ajụjụ blog dị ka spam. Ajuju m bu gini ma oburu na i kwuo okwu na blog dofollow na okwu nlezianya edozi nke di nkpa banyere saiti gi na ezigbo okwu? Kedu ka igwe ọrụ ọchụchọ si emeso njikọ ndị a? Njikọ njikọ ndị ahụ erughị ihe a na-ekwu karịa ma ọ bụrụ na ha nọ n'ahụ blog post?
Matt Chandler kwuru
Akwa post, Jeremy.
N'agbanyeghị uru, ezigbo ma ọ bụ na-aghọta, nke backlinks si blog kwuru, nke a bụ ihe atụ nke ebe ọ niile na-agbadata ọdịnaya.
Debe ihe dị mkpa, nghọta dị na blọọgụ ka nwere ike inye aka chụpụ ndị ọrụ na saịtị gị na ọrụ gị. Site n’itinye onwe gị, njirimara gị, aha ọma gị n’ebe ndị ọzọ nọ, ị na-eme onwe gị ka ikike nke ndị folks ga-achọ.
Mar 1, 2010 na 11: 38 PM
Njikọ nchịkọta akụkọ n'eziokwu ezigara na nkọwa nke blog nke na-enweghị àgwà rel = 'nofollow' bụ ezigbo njikọ na Google.
Mar 9, 2010 na 1: 46 PM
Kpamkpam jikọta ụlọ site na blọọgụ ndị yiri / maara nke ọma na ahịa niche gị ga - eme ka ị gbanye okporo ụzọ na saịtị gị. Dị ka ị na-enye na-akpali ihe, na-agbakwunye uru ndị blog´s isiokwu posts, blog nwe ga-enwe obi ụtọ na-enweta ndị na-ekwu na ka ị hapụ njikọ gị dị ka mma.
Enwere m ike ịbanye na mkparịta ụka banyere Ihe na-eme ka ibe weebụ na-abawanye na Startups.com! Can nwere ike ịgbaso nke a http://bit.ly/cCgRrC njikọ iji nweta azịza nye ajụjụ na azịza ndị ọkachamara ndị ọzọ etinyela.
Jeremy, ọ bụrụ na mmadụ na-eji WordPress CMS, ọ dịghị ndokwa iji họrọ iji mee = mee ọnọdụ na otu onye na-ekwu okwu. Kedu ka mmadu si emeso nke a?
Na mgbakwunye, enwere okwu a banyere “ịkwesighi ịkekọrịta ogo ibe gị na weebụsaịtị ndị ọzọ”. Enwere ndaba na arụmụka a ọ bụla?